भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या २३ हजार नाघ्यो
799 views •5shares
एजेन्सी । भारतमा ‘कोविड–१९’ संक्रमितको संख्या २१ हजार नाघेको शुक्रबार जनाइएको छ । गएको २४ घन्टायता भारतमा एक हजार ६४८ कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
शुक्रबार बिहानको तथ्यांकअनुसार भारतमा ‘कोविड १९’ का संक्रमितहरूको संख्या २३ हजार ७७ जना पुगेको यहाँँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको हो । उक्त मन्त्रालयका अनुसार भारतभर गएको २४ घन्टायता मृत्यु हुनेको संख्या ३७ जना रहेको छ । योसँगै भारतमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान जानेको संख्या ७१४ पुगेको छ ।
भारतमा देखिएका यी संक्रमितहरूमध्ये ४ हजार ७४९ जना भने उपचारपछि निको भएर फर्किएका छन् । मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार हाल यहाँ १७ हजार ६१० कोरोनाका संक्रमित विरामी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् ।
शुरुदेखि नै भारतको महाराष्ट्र कोरोना भाइरसबाट अत्यन्त प्रभावित राज्यको रूपमा रहेको यहाँँको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ । शुक्रबार पनि यो क्रम जारी नै रहेको उक्त मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
महाराष्ट्र राज्यमा मात्र संक्रमितहरूको संख्या ६ हजार ४३० जना पुगेको उक्त मन्त्रालय बताएको छ । यसैबीच महाराष्ट्रमा २८३ जनाको निधन भएको छ । संक्रमित मध्ये ८४० जना भने निको भएका छन् ।
महाराष्ट्रपछि दिल्ली र गुजरातमा यस भाइरसको संक्रमण उच्च मात्रामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आज दिएको जानकारीअनुसार दिल्लीमा २ हजार ३७६ सक्रमित रहेका छन् । संक्रमित मध्ये ८०८ जना निको भएका छन् भने ५० जनाको भने मृत्यु भएको छ ।
गुजरातमा २ हजार ६२४ मा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । संक्रमित मध्ये ११२ को ज्यान गएको छ । यसैबीच २५८ जना उपचारपछि घर फर्किएका समाचारमा जनाइएको छ ।
भारतमा यसरी दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ संक्रमितहरू थपिँदै जानु चुनौतीपूर्ण भएको यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन् । भारतको राजस्थान, तामिलनाडू, मध्यप्रदेश र केरला राज्यमा उच्च संख्या कोरोना संक्रमित रहेका जनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना घोषणा गर्नु भएको २१ दिने लकडाउनको अवधि समाप्त हुँदै गरेको अवस्था पुनः १९ दिनको लकडाउनलाई जोडिएको घोषणा गरेका थिए। –एएनआई
उत्तर कोरियाली नेता किम गम्भीर बिरामी भएको समाचार ‘सही नभएको’ ट्रम्पको भनाइ
469 views •2shares
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उन गम्भीररूपमा अस्वस्थ भएको विवरणहरु ‘सही नभएको’ बताएका छन् । स्थानीय समय अनुसार बिहीबार उनले उन गम्भीर विरामी भएको समाचार असत्य भएको दावी गरेका हुन् ।
‘उहाँ बिरामी भएको सूचना विभिन्न माध्यमबाट मैले पाएँ, मलाई लाग्छ उहाँ विरामी भएका विवरण अरु असत्य हुन्,’ कोभिड–१९ बारे नियमित सञ्चारकर्मीसँगको एक कुराकानीका सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने । ‘मलाई लाग्छ किमको स्वास्थ्य अवस्थाबारेको रिपोर्ट सही छैन । मैले सुने अनुसार समाचार सार्वजनिक गर्ने ‘नेटवर्क’ले पूरानो कागजातलाई सूचनाको आधार बनाएको छ ।’
उक्त अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरिया र त्यसका सर्वोच्च नेता किम जोन–उनसँग आफ्नो एकदमै राम्रो सम्वन्ध रहेको स्मरण पनि गरे । नेता किम स्वस्थ अवस्थामै रहेको उनले आशा व्यक्त गरे । उनले यसअघि गत मङ्गलबार उन गम्भीर अस्वस्थ भएको सूचना आएको भन्दै उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए ।
‘उहाँ सिकिस्त विरामी हुनुभएको छ भन्ने विवरण मलाई प्राप्त भएको छ, अरु हामीलाई केही थाहा छैन, मैले केबल उहाँको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न सक्दछु’ ट्रम्पले भने । अमेरिकी गुप्तचर निकायका अधिकारीहरुले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किमको खतरापूर्ण शल्यक्रिया गरिएको र सिकिस्त बिरामी भएको विवरण दिएपछि उनले यस्तो बताएका थिए ।
नेता किम यही अप्रिल १५ तारिखका दिन आफ्ना हजुरबुवाको जन्मोत्सव कार्यक्रममा पनि अनुपस्थित हुनुभएको समाचारहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले दिएका छन् । उनी त्योभन्दा चार दिन अगाडि एउटा सरकारी बैठकमा भने देखिनुभएको गुप्तचर निकायहरुको सूचनालाई उद्धृत गर्दै सिएनएनले जनाएको थियो ।
तर उत्तर कोरियाली सरकारी अधिकारीहरुले भने किम बिरामी भएको पुष्टि गरेका छैनन् । उनीहरुले पहिलाभन्दा अहिले कुनै फरक नरहेको दावी गरेका छन् । योन्ह्याप समाचार संस्थाले सरकारी अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार उनीहरुले कुनै फरक नरहेको बताएका छन् । उत्तर कोरियाली राजनीतिक प्रणालीका कारण पर्याप्त र यथार्थ सूचना सहजै सार्वजनिक हुन नसक्ने भएकाले वेला वेलामा सूचताप्रतिको अन्यौलता सिर्जना हुने गर्दछ ।
किटाणु मार्ने इन्जेक्सन लगाउँदा कोरोना नष्ट हुन्छ भनेपछि ट्रम्पको चौतर्फी आलोचना
996 views •4shares
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उनले किटाणु मार्ने इक्जेक्सन बिरामीको शरीरमा लगाउँदा (डिस्इन्फेक्टेन्ट गर्दा) कोरोना ठिक हुनसक्ने बताएका थिए । उनले बिरामीको शरीरमा युभी लाइट पठाउँदा पनि भाइरस मर्नसक्ने बताएका थिए । चिकित्सकहरुले यी दुबै कुरा वाहियात रहेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
ट्रम्पका एक अधिकारीले सूर्यको प्रकाश र डिइन्फेक्सनले संक्रमण मार्ने बताएका थिए । डिस्इन्फेक्टेन्ट खतरनाक पदार्थ हो, शरीरमा इन्जेक्सनमार्फत लगाउँदा विषालु पनि हुनसक्छ । त्यस्तै, छाला, आँखा र स्वासप्रश्वासमा प्रकाशको सम्पर्कले खतरा पैदा गर्नसक्छ ।
बिहीबार कोरोना भाइरसबारे ह्वाइटहाउसमा भएको ब्रिफिङमा एक अधिकारीले अमेरिकी सरकारको अनुसन्धान सार्वजनिक गरेका थिए । यस अनुसन्धानमा सूर्यको प्रकाश र तातोसँग सम्पर्कमा आएपछि कोरोना भाइरस कमजोर हुने उल्लेख थियो । यस अध्ययनले ब्लिचले ५ मिनेटभित्रै ¥यालमा रहेको मार्नसक्ने र अल्कोहल आइस्प्रेपलले अझै चाडों खतम गर्ने समेत जनाएको थियो ।
युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरियटीका साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी निर्देशक बिलियम ब्रायनले यस खोजीबारे पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए । ट्रम्पले यसबारे थप अध्ययन गरिने बताएका थिए । ‘त्यसैले हामीले सायद शरीरमा अल्ट्रभ्वाईलेट वा धेरै शक्तिशाली प्रकाश दिनेछौं,’ ह्वाइटहाउस कोरोना भाइरस रेस्पोन्स कोओर्डिनेटर डाक्टर डिबोरा ब्रिक्सतर्फ फर्किएर ट्रम्पले भनेका थिए, ‘मलाई लाग्छ तपाईले भनेअनुसार अहिलेसम्म यसबारे जाँच भएको छैन र तपाईहरु परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ । र मैले भनेको थिएँ, तपाईले प्रकाशलाई शरीरभित्र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ छाला या अन्इ माध्यमबाट र मलाई लाग्छ तपाईले भन्नुभएको थियो कि यसबारे पनि तपाईहरु जाँच गर्दै हुनुहुन्छ । यो निकै राम्रो हुनसक्छ ।’
उनले बिक्सतर्फ फर्किएर फेरि सोधेका थिए, ‘कोरोना भाइरसको उपचारमा ताक्रम र प्रकाशको प्रयोग गरिएको कहिल्यै सुन्नु भएको छ ।’
जवाफमा ब्रिक्सले भनेकी थिइन्, ‘ उपचारका रुपमा छैन । मेरो भनाई ज्वरो राम्रो कुरा हो । जब तपाईलाई ज्वरो आउँछ तब तपाईको शरीरलाई प्रतिक्रिया जनाउने यसले सहयोग गर्छ भन्ने हो । तर मैले प्रकाश वा तापक्रमबारे देखेको छैन ।’
ट्रम्पले जवाफमा भनेका थिए, ‘मलाई लाग्छ अब हेर्नुपर्छ ।’
एक पत्रकारले ब्रिफिङका दौरान ट्रम्पको यस्तो गैर जम्मेवार अभिव्यक्तीले अमेरिकीमाझ भ्रम फैलाउन सक्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
ट्रम्पको यस्तो योजनाले ज्यानै लिनसक्ने भन्दै चिकित्सकले आलोचना गरेका छन् । पुल्मोनोलोजिस्ट डाक्टर भिन गुप्ताले एनबीसी न्युजसँग भनेका छन्, ‘मानिसको शरीमा क्लिन्सिङ उत्पादन इन्जेक्ट गर्ने यस्तो योजना गैरजिम्मेवार र खतरनाक छ । यो साझा उपाय मानिसले आत्महत्या गर्न चाहेका बेला प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् ।’
पश्चिम भर्जिनिया, चार्लिस्टनस्थित डाक्टर कासिफ महोम्मदले ट्वीट गरेका छन्, ‘फिजिसियनका रुपमा म कोभीड–१९ को उपचारका लागि फोक्सोमा डिस्इन्फेक्टेन्ट इन्जेक्ट गर्न वा शरीरमा युभी रेडियसन पठाउने सिफारिस गर्न सक्दिंन । ट्रम्पबाट स्वास्थ्य सल्लाह नलिनुस् ।’
जुकरवर्ग सान फ्रान्सिस्को जनरल अस्पतालका पोल्मोनोलोजिस्ट जोन बाल्मेसले पनि यसको विरोध गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले मलेसियाको औषधी ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन’ कोरोना भाइरसको उपचारका लागि सम्भावित औषधी हुनसक्ने दाबी पनि गरेका थिए । यद्यपी, पछिल्लो समय उनले यसबारे बोलेका छैनन् । आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतिय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका प्रत्यासी रहेका जो बाइडेनले ट्वीटरमा ट्रम्पको मजाक गर्दै लेखेका छन्, ‘युभी लाईट ? इन्जेक्टिङ डिस्इन्फेक्टेन्ट ? यहाँ योजना छ ।’ उनले राष्ट्रपतिलाई धेरैभन्दा धेरै परीक्षणमा जोड दिन र स्वास्थकर्मीलाई अत्यावश्यक पिपिईको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
चीनद्वारा स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग खारेज, बतायो यस्तो कारण
689 views •7shares
कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिको विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग चीनले खारेज गरेको छ । बेलायतमा चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ चेन वेनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा यस्तो प्रकारको माग राजनीतिबाट प्रेरित भएको र कोरोनाभाइरसविरुद्ध चीनको लडाईंलाई कमजोर गर्ने कोसिस गरेको बताएका छन् ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणको सुरुवातदेखि नै चीनले पारदर्शीता नअपनाएको र सूचना लुकाएको आरोप लाग्दै आएको छ । कोरोनाभाइरस सुरुवात गत वर्ष चीनको ऊहान शहरबाट सुरु भएको थियो ।
युरोपियन युनियनको रिपोर्टमा पनि चीनले कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित सही सूचना सार्वजनिक हुन नदिएको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि यो मामलामा लगातार चीनमाथि हमला गर्दै आएका छन् ।